Hababka wax soo saarka dayactirka ee caadiga ah
NADIIFINTA GUUD Isticmaal saabuun fudud sida saabuunta dharka lagu dhaqo oo biyo ah iyo biyo diirran si aad u nadiifiso. Si fiican u biyo raaci si aad uga saarto dhammaan saabuunta si tartiib ah u qalaji. Masax meelaha dusha ka nadiifi oo gebi ahaanba biyo ku dhaq biyo isla markiiba ka dib codsi nadiifiyaha ka dib. Biyo raaci oo qalaji wax kasta oo ...
Bandhigga IBS & KBIS 2020
Bandhigga IBS & KBIS, Booth maya: C1247,21st-23nd, Jan, 2020, Las Vegas !!! Waad ku mahadsantahay booqashadaada! Waxaan rajeynayaa inaan ku arko marka xigta.
Suuqa qalabka qalabka musqusha ee Brand wuxuu leeyahay mustaqbal ifaya
Waxaa qoray admin on 21-05-02
Qalabka fayadhowrka ayaa lagama maarmaan u ah nolosha dadka. Maalmahan, badeecooyinka alaabada fayadhowrka ma aha oo kaliya shaqooyin dhameystiran, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin qaabab badan. Nidaamka qurxinta qolka, musqusha ayaa ku sii kordheysa culeys badan qurxinta, waxaana aad iyo aad uga walaacsan kuwa daba jooga moodada. N ...
Kala soocida qalabka Qalabka Musqusha
Alaabada Musqusha Alaabta ugu muhiimsan waa: 1. Bir aan xadi lahayn: waa alaabooyin la awoodi karo. Waxyaabaha wanaagsan ee ka hortagga-daxalka ee birta birta ah, laakiin way adag tahay maxaa yeelay alxanka birta birta ah, waxqabadka wax soo saarka birta ayaa liita, sidaa darteed kaliya nidaam fudud, qaabeynta wax soo saarka ayaa si fudud loo fududeeyay ...
Qiimaha tartanku waa jihada cusub ee horumarka shirkadda
Fasaxyada sanadlaha ah, shirkadaha waaweyni waxay soo bandhigeen musqusha doorbidida waxay bilaabeen dagaal qiimo leh, laakiin suuqa kala iibsiga noocyada macaamiisha sii kordheysa, macaamiisha caqliga leh inay iibsadaan xitaa shirkado badan oo kujira qiimaha dagaalka ayaan gaarin natiijooyinkii la rabay, tartanka qiimaha wax faa iido ah malahan, ah ...